ကျူရှူးပြည်နယ် ကို အလည်တစ်ခေါက် ( ၂ ရက်မြောက်နေ့ )　by[PakaPrich] | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ကျူရှူးပြည်နယ် ကို အလည်တစ်ခေါက် ( ၂ ရက်မြောက်နေ့ )　by[PakaPrich]
Hein Pyae Phyo က အင်ျဂါနေ့, 08/02/2016 - 15:07 အခြိနျတှငျ ရေးခဲ့၏
肥前夢街道忍者村(hizenyumekaidouninjya Village) ဟီဇဲန်း ယူမဲ ကိုင်ဒို နင်ဂျာရွာ
စာဂ ခရိုင် ဥရဲရှိနို မြို့ မှာ ရှိ တဲ့ နင်ဂျာ ရွာ ကလေး ကို ဟာ ယခင် က နင် ဂျာ တွေ ရဲ့ လေ့ ကျင့် ရေး စခန်း တစ် ခု ဖြစ်ခဲ့ ဖူး ပါတယ်။ ဒီနေရာ ဟာ အယ်ဒို ခောတ် ရဲ့ အငွေ့ အသက် တွေ ကျန် ရှိ နေသေး တဲ့ အဆောက် အအုံ ပေါင်း မြောက် များ စွား ကို ဆောက် လုပ်ထား ပါတယ်။
ကလေး တွေ နဲ့ ကလေး စိတ် မကုန် သေး တဲ့ သူ တွေ ဒီ နေရာ မှာ နင် ဂျာ လာ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ - နင် ဂျာ ၀တ် စုံ အငှား လိုက်ချင်း ၊ ဓါး တု ၊ နဲ့ မြား ပေါက် နဲ့ နင် ဂျာ ရှိုး တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး လေး တို့ နဲ့ လာ လည် မယ် ဆို ရင် ဥရယ် ရှိ နို ရေ ပူစမ်း မှာ ရေ ချိုး ပြီး ရင် ဒီ ကို လာ ဖို့ ဖိတ် ခေါ် ချင် ပါတယ်။
(Yutofu Inari Jinja, 祐徳稲荷神社) ယုတိုဖု အိနရိ နတ်ကျောင်း
အခြား မြို့ ကို မသွား ခင် မှာ အရင် ဦး ဆုံး ဒီ နေရာ မှာ ၀တ် ပြု သွား ကြရအောင် ။ ဒီ ရွာ လေး သေးသေးလေး ထဲ မှာ ဂျပန် နိုင် ငံ ၃ ခုမြောက် အိနရိ နတ်ကျောင်း ကို တည် ထား ပါတယ်။ နတ်ကျောင်း ဟာ အတော် အတန် ကြီး ပြီး နတ်ဘုရားပေါင်း မြောက် များ စွား ကို ကိုး ကွယ် ထား ပါတယ်။ ဥပမာ - အရောင်း အ၀ယ်ကို စောင့်ရှောက် တဲ့ နတ် ၊ အိမ် စောင့် နတ် ၊ တံငါ စောင့် နတ် ၊ နဲ့ နှလုံး သား ရေး ရာ နတ် တို့ ဖြစ် ပါတယ်။
အာရိတာ မြို့ ဟာ အိုး ဖုတ် လုပ်ငန်း နဲ့ ပက်သက် ပြီး တော့ နာမည် ကြီး တဲ့ မြို့ တစ် မြို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇ ရာ စု လောက် က အများ အပြား ထုတ် လုပ် ခဲ့ ပြိး အနောက် နိုင် ငံ တို့ ကို တင် ပို့ ခဲ့ ပါတယ်။ အာရိ တ ရိုး ရာ အိုး များ ရဲ့ ထူးခြား ချက် ကတော့ ပထမဆုံး အပြာရောင် ကို အခြေ ခံထား ကာ နောက်အနီရောင် ၊ နောက် ဆုံဒ မှာ ရွှေရောင် ကို ထည့် သွင်း ထား ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
有田ポーセリンパーク အာရိ တ ပိုဆဲလင်း ပါ့ခ်
အာရိ တာ ပို ဆဲလင်း ပါ့ခ် ဟာ အိုး ဖုတ် ခြင်း လုပ် ငန်း တွေ က စု စည်း နေ တဲ့ နေရာ တစ် ခု ဖြစ်ပြီး တော့ အများ အပြား သော ရိုး ရာ အိုးများ ကို ဖုတ် လုပ် နေ ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ ဒီ မှာ ကိုယ် တိုင် အိုးမှာ ပန်းချီ ဆွဲ လို့ ရတဲ့ပလန် ရှိ ပါတယ်။
သတိ ! ကိုယ် တိုင် လုပ် ထား တဲ့ အိုး ကို တန်း ပြီး အိမ် ပြန် သယ်လို့ မရပါ ။ အိုးဖုတ် ခြင်းးက ၁၂ နာ ရီ အကြာ မှာ ဖုတ် ခြင်း ပြီး ပါတယ်။ ဂျပန်ပြည် တွင်း ဆို ရင် ၁ လအတွင်း မှာ ကိုယ့် အိမ် လိပ် စာ ကိုပို့ပေး ပါတယ်။ ပြည် ပ ဆို ရင် ၂ လလောက်ပေါ့ !
(ギャラリ－おおた　の有田焼カレ－) အာရိ တာ ရာခိ ကာရီ
ဂျပန် က ကာရီ ကို ကြိုက် နှစ် သက် သူ များ ဒီ ကို လာ ပြီး စား ရင် နောင် တ မရနိုင် ဘူး လို့ ထင် ပါတယ်။ ဒီ က ကာရီ စာ ချီးစ် တောင် ပါပါတယ်။ နောက် ပြီး ဆိုင် တွင်း မှာ အာရိတ က အိုး များ ကို တည်ခင်း ပြသထား ပါတယ်။ ကာရီ စား ပြီး ရင် အဲ့ အိုး ပန်း ကန် ကို လဲ ၀ယ်ယူရရှိ နိုင် ပါတယ်။
長崎ハウステンボス ( နာဂစခိ ဟောက်စတန်းဘိုးစ်)
ဂျပန် မှာ ရှိ နေရက် နဲ့ ဥရော ပကို ရောက် သွား သလို ဖြစ်သွား ပါလိမ့် မယ်။ ဟောက်စတန်းဘိုးဟ် ဟာ ကျူရှူး မြို့ ရဲ့ ကြီး မားသော Theme park တစ် ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ မှာ ဆို ရင် အမျိုး မျိုး သော လည် ပတ် စရာ နဲ့ ကစား စရာများ လဲ ရှိ ပါတယ်။ ဥပမယ- ရဟတ် ၊ ဘန်းဂျီ ဂျမ့်ပ် ။ ကျူးလစ်ပန်းပင် လှလှ လေး တွေ နဲ့ ည ပိုင်း မှာ မီး အလှ ဆင် ပွဲတော် လဲရှိပါတယ်။